अमेरीकाको ८०,००० डलरको जागिर छोडेर यूएईमा काम गर्दै गरेका ब्याक्तिको कथा – खाडी न्यूज-बिदेशमा हुने नेपालीहरूका लागी
November 28, 2018 rpsrijan0
यूएई — सामान्यता खाडीमा ‘३ डी’ को काममा नेपालीहरु जाने बुझाई हो । तर, अवस्था फेरिएको छ । सपना लोकको रुपमा हेरिने यूरोप र अमेरिका छाडेर पनि कति नेपालीले यूएर्इको ‘३ एस’ काम रोजेका छन् । तिनै मध्येका हुन्, प्रदीप पौडेल ।
अमेरिकामा वार्षिक ८० हजार डलरको रोजगारी छोडेर कोही दुबई आँउछ भन्ने सुन्दा कस्तो लाग्छ? त्यो पनि अहिले हो र? यो झण्डै २० वर्ष अघिको हो । पक्कै पनि त्यो मान्छे ‘ठीस’ भयो भन्ने लाग्छ हैन? लाग्न सक्छ । लाग्नु स्वभाबिक हो ।
तपाईलाई कसैले दुबई जाने कि अमेरिका भनेर अफर दियो भने कहाँ रोज्नु हुन्छ? अवश्य पनि तपाईले अमेरिका रोज्नु हुनेछ । दुबई जाने कि लण्डन भनेर सोधे नि? अवश्य पनि लण्डन भन्नु हुनेछ ।
अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र युरोपका मुलुक छोडेर कोही ब्यक्ति युएई आउन किन चाहन्छ त? ती देशहरु भन्दा दुबई हरेक कुराले अब्बल लागेर हुनुपर्छ । कसरी?
तपाईंसँग सीप, क्षमता र पढाई छ भने अब अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानाडा भन्दा कम रहेन दुबई । पढाई र क्षमता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम पाउने ठाउँ पाए कोही किन दुरदराजको अमेरिका जाने? अब यी मुलुक ‘३ डी’ अर्थात ‘डर्टी, डेन्जरस् र डिमिनिङ’ काम गराउने मुलुक रहेन बरु ‘३ एस’ अर्थात ‘सुपर्ब, सेफ र सेल्फ रेस्पेक्ट’ मुलुकको रुपमा चिनिन थालेका छन् । ‘ह्यापीनेस्’ मन्त्रालय रहेको यो मुलुक सबै जनता खुशी रहेको हेर्न चाहने मुलुक पनि हो । ‘३ डी’ काम गर्न अमेरिका जाने कि क्षमता अनुसारको घुम्ने कुर्सीमा हाकिम भएर काम गर्ने भन्ने बारे निर्णय गर्ने जिम्मा तपाईंको ।
तर्क नै गर्नेले त अन्य कतै नजानु बरु आफ्नै देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्न सक्छन् । आफ्नो देशमा रोजगारी गर्न पाए अर्काको देश किन पो जानु छ र? आमा बाउ, आफन्त नातागोता छोडेर खाडी देशमा नङ्ग्रा खियाउन कसलाई पो रहर लाग्छ?
चाहेर होस् या नचाहेर होस्, अमेरिका होस् या खाडी मुलुक होस्, बैदेशिक रोजगार हाम्रो देशको अभिन्न अङ्ग भईसकेको छ । यति नजिक ४ घण्टाको हवाई दुरीमा राम्रो काम पाए २४ घण्टा उडेर अमेरिका किन जाने? मेक्सिकोको पर्खाल नाघेर भाँडा माझ्न अमेरिका किन जाने? रातदिन जङ्गल हिडेर, ज्यान जोखिममा पारी पारी डुंगामा चढेर चम्काउने, धस्काउने र मस्काउने काम गर्न युरोप अमेरिका किन जाने?
दुबई आउनुस्, सीप र क्षमता अनुसारको काम गर्न दुबई आउनुस् तर सुरक्षित भएर । सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले अबलम्बन गरेका नियम पालाना गरेर आउनुस् । दलाल र मानब तस्करको पछि लागेर हैन । ख्याल गर्नुहोला, मानब तस्कर र दलालको प्रलोभनमा परेर लाखौं तिरेर भिजिट भिसामा आउनु भो कि तपाईं फस्नु भो । पछुताउनु बाहेक तपाईंले केही पाउनु हुन्न ।
गतवर्ष मैले अमेरिका हैन युएई आउनुस् भन्ने लेख लेखेपछि पक्ष र बिपक्षमा बहस भए । यो लेख त्यसकै अर्को श्रृंखलाको रुपमा गाउँको एउटा ठिटो किन र कसरी दुबई आयो भनेर उदाहरण प्रस्तुत गरेको छु । यो उदाहरण कयौं उदाहरणहरु मध्येको हो । यस्ता उदाहरणहरु यहाँ अनगिन्ती छन् ।
स्याङ्जाको सदरमुकाम वालिङ नगरपालिकाबाट चार घण्टाको पैदल दुरीमा रहेको मल्याङ्कोट गाउँमा जन्मेको एक नेपाली हाल अमेरिकी बैंक सिटी बैंक युएईको भाईस प्रेसिडेन्ट भएर बसेको छ । बैंकको कमोडिटिज् एण्ड सेक्युरिटिज् सर्विसेस् (स्टक मार्केट सम्बन्धि) बिभागको कुबेत देश प्रमुख हुन्छ, सोही बिभागको गल्फ प्रोडक्ट म्यानेजर पनि भएर राज गरेको छ । कहिले कुबेत त कहिले दुबईमा घुम्ने कुर्सीमा बसेर काम गर्छन् ।
उनी हुन्, प्रदीप पौडेल । अमेरिकाको वार्षिक ८० हजार डलरको रोजगारी छोडेर आज भन्दा १२ वर्ष अघि दुबई आईपुगे । अमेरिका किन छोड्नु भो? मैले भेटको शुरुमै यही प्रश्न तेर्स्याएँ । पौडेल मुसुक्क मुस्कुराए र भने, ‘अमेरिका नछोडेको भए म यति वर्षमा सायद आफ्नो सजिलोको लागि त्यहाँको नागरिकता लिईसक्थें होला, म नेपाली कहाँ हुन्थे र? म त नेपाली हुनुमा गर्व गर्छु । बेलैमा अमेरिका छोड्न पाएकोमा खुशी नै छु ।’
अमेरिका छोड्न पाएकोमा खुशी हुने नेपाली अहिलेसम्म भेटेको थिईन । बरु दुबई हुँदै वा ईरान हुँदै टर्की भएर जङ्गल र समुन्द्रको बाटो हुँदै ज्यानलाई जोखिममा पारेर मेक्सिकोको पर्खाल नाघेर अमेरिकी हुने वा हुन नसक्ने धेरै नेपालीहरुको कथा सुनेको छु । अमेरिकी हुनलाई महिनौ लगाएर मेक्सिको, ग्वाटेमाला, होण्डुरस, कोस्टारिका जस्ता दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरुमा पुगेर अलपत्र परेकाहरुको कथा पढेको छु । पौडेल भने दुनियाले स्वर्ग मानेको अमेरिका छोडेर नेपालीहरुले मजदुरी गर्ने, नेपाली समाजले हेयको नजरले हेर्ने, नेपाल सरकारले खाडीको डोरी लाहुरे मानेको युनाईटेड अरब ईमिरेट्सको दुबईमा कसरी र किन आईपुगे?
अमेरिका मात्र हैन, कुनै बेला संसारलाई आफ्नो कब्जामा राखेको बिकासित देश बेलायत पनि उनले छोडे । बेलायत मात्र छोडेको कहाँ हो र, उनले स्पेनको बार्सिलोना पनि छोडे । मेरो कौतुहलता बस्सरी जाग्यो । म खोतल्न चाहान्थें ।
धेरै पटकको प्रयास बाबजुद मित्र सन्तोष प्रसाईंलाई साथ लिएर म उनको घर पुगें । दुबईको हाइफाइ क्षेत्र द ग्रीन्स भिलेजमा उनी २ कोठे फ्ल्याटमा बस्छन्, श्रीमती र २ जना छोराछोरीसहित । कति भाडा तिर्नु हुन्छ नि? जसै घर भित्र छिरें, मैले सोधे । उनी मुस्कुराए र भने, ‘आफ्नै हो भाडा तिर्नु पर्दैन ।’ यसो भनिरहँदा उनको मुहारमा कता कता संकोच माने जस्तो देखिन्थ्यो । मलाई त दुबईमा हलिवूड र बलिवूडका कलाकारको मात्रै फ्ल्याट होला भन्ने लाग्थ्यो । नेपालीकै भए पनि घरानीया ब्यापारीहरुको होला जस्तो लाग्थ्यो । प्रसाईंले बीचैमा बोले, ‘यो २ कोठे फ्ल्याटमा आाफै बस्नु हुन्छ, पल्लो घरमा भएको १ कोठे फ्ल्याट चाही भाडामा लगाउनु हुन्छ ।’
अमेरिकामा त फ्ल्याट वा घर हुने टन्नै हुन्छन् । अमेरिका भासिए पछि नेपालीको पहिलो सपना नै घर र गाडी किन्नु हुन्छ । बैंकबाट ऋण र क्रेडिट कार्ड घोटेर घर किन्नेको शान नै बेग्लै अमेरिकामा । आहा, दुबईमा पनि नेपालीको घर ।
मनमनै सोचें खाडीमा डोरी लाहुरे मात्र देख्नेलाई यता घुमाउ कि ! एक सामान्य परिवारको ब्यक्ति यस्तो प्रगति ?
कसरी अमेरिका पुग्नु भो ? किन अमेरिका छोड्नु भो ? फेरी किन युरोप जानु भो ? किन युरोप छोड्नु भो ? म शुरु देखि नै प्रश्न गर्न थालें ।
‘सुन्नु हुन्छ’ ? पौडेलले सुरु गरे ।
‘कक्षा ७ मा सिद्धार्थ बनस्थलीमा पढ्थें । काठमाडौंको बाल मन्दिरले राष्ट्रिय स्तरको कथा प्रतियोगिताको आयोजना गरेको थियो । त्यो कथा प्रतियोगितामा प्रथम भएँ । म प्रथम भएको कथा सुन्नु हुन्छ?’ उनी कथा सुनाउन थाले । ‘म सुतिरहेको थिएँ । सुत्दा सुत्दै म एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट भएछु । त्यसपछि बेलायतको बिद्यार्थी पढ्ने ईटन कलेजबाट छात्रबृत्ति पाएर बेलायत गएछु । सफा कलेज, चिल्लो टाइल्स र घरहरु देखेर म मक्ख पर्दै हिडिरहेको थिएँ । चिप्लिएर लडें । ऐया भनेको त के भो बाबु भन्दै बुवा पो आउनु भयो । मेरो कथा यही थियो । शायद यही सपनाको कथाले मलाई अमेरिका पुर्‍यायो’ उनले भने ।
उनी कथामा प्रथम भए जस्तो एसएलसीमा बोर्ड फस्ट भएनन् बोर्ड सेकेन्ड भए । अनि पूर्ण छात्रबृत्तिमा पढ्न अमेरिका गए । अमेरिकामा कम्प्युटर सम्बन्धी अध्ययन सकेर केही वर्ष आईटी अफिसरको रुपमा काम पनि गरे । अमेरिका बसुन्जेल सामाजिक गतिबिधिमा पनि उत्तिकै उल्लेखनीय भूमिका निभाए । कलेजमा अध्ययन गर्दा हिमालयन क्लब खोलेर नेपाली कलाकारहरुलाई अमेरिका लगेर धेरै साँस्कृतिक कार्यक्रमहरु पनि गरे । उनी ८ वर्ष अमेरिका बसे । धेरै थोरै पैसा पनि कमाए ।
अमेरिकामा अध्ययन सकेर बस्दा पनि उनी खुशी हुन सकेनन् । सधैं अर्काकोमा काम गरेर दोश्रो दर्जाको नागरिक हुनु भन्दा त बरु नेपालमै गएर केही गर्ने सोच पलायो । २०५२ सालमा अमेरिका पुगेका उनी २०६० सालमा नेपाल फर्किए । नेपालमा भरखर फस्टाउदै गरेको आईटी क्षेत्रमा लागेर ‘एक्स्पर्ट ग्रुप डि २ हवकी’ भन्ने कम्पनीमा ३२ जना कामदारको चीफ अफिसर भएर काम गरे । आफ्नै ब्यवसायको पनि हिसाब किताब, नाफा घाटा, आर्थिक प्रतिबेदन हेर्न अरुलाई खेताला खोज्न पर्ने भएकोले उनलाई एमबीए पढ्न मन लाग्यो । उनी अर्ध छात्रबृत्तिमा एमबीए पढ्न बार्सिलोना पुगे । २ वर्षे एमबीए पढ्दा पढ्दै उनलाई सिटी बैंकले काम गर्न लण्डन बोलायो । पढाई सकेपछि उनी बर्सिलोना छोडे र लण्डन लागे ।
लण्डनमा ९ महिना जति काम गर्दा गर्दै पौडेललाई दुबई जाने अफर आयो । सिटी बैंकले नै उनलाई उक्त अवसर दिएको थियो । उनी खुशीले गद्गद् भए । किनकी दुबईमा अवसर थियो । योग्यता र क्षमता अनुसारको पद र सम्मान थियो ।
‘दुबई आएर राम्रो निर्णय गरें जस्तो लाग्छ’ उनी भन्छन्, ‘केही समय पहिले बुवा बिरामी हुनु भएको थियो । यहीबाट डाक्टरको ‘अपोइन्टमेन्ट’ फिक्स गरें । सल्लाह मागें । डाक्टरको सल्लाह अनुसार नै सरर ४ घण्टामा नेपाल गएर बुवाको सानो अपरेसन गरेर केही दिन पछि फर्कें । अमेरिका वा लण्डन भएको भएयति सजिलोसँग त्यो सम्भब थिएन ।’
सम्पत्ति चाही कति कमाउनु भो? उता भन्दा यता थोरै कमाउनु भयो कि? ‘कहाँ हुनु, दुबई नबसेर अमेरिका वा युरोप बसेको भए आर्थिक रुपमा जति सफलता हाँसिल गरेको छु, त्यति सकिन्न थियो’ उनले ठोकुवा नै गरे, ‘मैले दुबई बसेर आर्थिक प्रगति गर्न कुनै गलत कार्य गर्नु परेको छैन । बरु धेरै मेहिनत गरेको छु ।’ कस्तो राम्रो कुरा । दुबई बसेर हुण्डी र सुण्डी (अबैध सुनको कारोबार) गर्नेहरुले उनीबाट सिक्न जरुरी छ ।
सम्पत्ति त धेरै नै कमाउनु भो ल । आफ्नो र परिवारका सामाजिक सुरक्षाका कुराहरु छन्, सुबिधा र शिक्षाका कुराहरु छन् । त्यो त दुबईमा छैन होला नि । मेरो कुरा भुईमा खस्न नपाउदै उनले भने, ‘फरक फरक शिक्षा प्रणाली अनुसारका ब्रिटिस, अमेरिकन, आईबी आदि विश्वका सबै टप विश्व बिद्यालय र स्कुलका पाठ्यक्रम शिक्षा यहाँ पढ्न पाईन्छ ।’
‘अर्को कुरा तपाईंलाई थाहा छ ? दुबईमा तपाईंको जति तलब हुन्छ नि त्यति नै बैंकमा जान्छ र त्यती नै बचत गर्न सक्नु हुन्छ’ उनी भन्छन् । युएई धेरै कुरामा ट्याक्स फ्री देश हो । दिनरात हड्डी घोटेर तपाईंले कमाएको पैसा सरकारलाई तिर्नु पर्दैन । सम्पत्ति कर लाग्दैन । आयकर तिर्नु पर्दैन । युरोप र अमेरिकामा राज्य हेरिकन ३३ देखी ५० प्रतिशत भन्दा बढी त ट्याक्स तिर्नु पर्छ । त्यति ट्याक्स तिरे पछि सुबिधा त पाउनु पर्‍यो । त्यो त तपाईंकै पैसा हो नि ।
‘अब धेरै बिदेश बस्ने हैन, बरु तपाईं पनि फर्कनुस् नेपालमै केही गर्नु पर्छ’ बिदा हुने बेला उनी भन्दै थिए, ‘बिदेशमा सिकेको सीप र ज्ञानलाई नेपालको बिकासमा लगाउन पाए आनन्द लाग्ने थियो । अमेरिका बसेको भए उतै हराउँथे होला, उतैको नागरिक बन्थें होला, उतैको पासपोर्ट बोक्नु र नागरिक हुनुमा गर्व गर्थें होला, तर कहिल्यै पनि त्यसो गर्न मन लागेन । अब त अति भयो, बिदेशको बसाइ पनि । नेपालमै केही गर्न मन लागेको छ । अब छिट्टै नै नेपाल फर्कन्छु होला ।’
मेक्सिकोको पर्खाल नाघ्न मरिहत्ते गर्नु पर्ने कारण रहेन अब । रातदिन नङ्ग्रा खियाएर दुई चार हजार डलर कमाउन तिसौं लाख खर्च गर्नुको पनि अर्थ रहेन । तपाईंसँग सीप छ, तपाईंसँग क्षमता छ, पढाई छ भने त्यही अनुसारको काम गर्न खाडी आए फरक पर्दैन । अमेरिका र युरोप भन्दा बढी खाडीमा कमाउन सक्नु हुन्छ ।
यो लेख कान्तिपुर बाट साभार गरीएको हो र लेखक हुनुहुन्छ मेघराज सापकोटा ।
आधा दर्जन देशले पनि झुकाउन नसकेको कतार , नाकाबन्दी पछी अर्थतन्त्र झनै सुदृढ
April 24, 2020 April 24, 2020 rpsrijan
May 11, 2020 May 11, 2020 rpsrijan